I-Istanbul Metro yathutha abagibeli abayizigidi ezingama-65 abayizigidi ezingama-200 ngoDisemba | RayHaber | raillynews
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmara34 IstanbulI-Istanbul Metro yathutha abagibeli abayizigidi ezingama-65 abayizigidi ezingama-200 ngoDisemba
13 / 02 / 2020 34 Istanbul, sesitimela, JIKELELE, KENTİÇİ Rail Systems, IZIKHUNGO, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, Metro, Metro Istanbul, TURKEY
Izitimela ezingaphansi kwe-Istanbul zithwala abagibeli abayizigidi eziyizigidi ngoDisemba
NgoDisemba wonyaka wezi-2019 iSchool Card Performance Scorecard yeMetro Istanbul ishicilelwe. Ngokuhambisana nalokhu, ongaphansi komhlaba we-Istanbul waphatha izindiza ezi-844 million ezingama-153 ngezimoto ezingama-495 ngoDisemba futhi zathwala abagibeli abayizigidi ezingama-65 abayizinkulungwane ezingama-200.
ujantshi opharetha ngobukhulu eTurkey emzini Istanbul Metropolitan Municipality Istanbul ephethwe Metro siyaqhubeka İstanbullular'l Imininingwane ukwabelana ngokuqonda obala, nabakwazi ukuziphendulela kamasipala. Inkampani yenkampani kaDisemba 2019 yokusebenza okusebenzayo yashicilelwa.
Inani labagibeli lenyuke ngezigidi ezingama-2018 wezigidi ezingama-3 uma kuqhathaniswa nowe-900
Ngokusho kwalokhu; NgoDisemba wango-2019, kwahamba izimoto ezingama-158 nezindiza eziyizi-844 153 ezingama-495 eziteshini ezingama-148 emigwaqweni engaphansi kwe-Istanbul. Isibalo sezindiza sasingu-500 2018 ngesikhathi esifanayo ngonyaka owedlule. Izimoto ezihamba amakhilomitha ayizigidi ezingama-8.2 ngoDisemba 8.4 zafinyelela kumakhilomitha ayizigidi eziyi-2018 ngenyanga efanayo kulo nyaka. Ngenxa yale mizamo, isibalo sabagibeli, esasiyizigidi ezingama-61 zamakhulu angama-300 ngoDisemba 2019, sakhuphuka ngoDisemba 65 futhi safinyelela ezigidini ezingama-200 ezigidi ezingama-XNUMX.
Inani Lezindiza ezifinyeleleke ngesikhathi lingaphezulu kwesilinganiso
Ngokombiko wokusebenza kweMetro Istanbul, amaphesenti angama-2019 ezindiza ezenzeka ngoDisemba ka-98.91. Isilinganiso sokufika ngesikhathi senhlangano yezimpawu zamazwe omhlaba iNova-Comet, eyayingamalungu angama-5 emazwenikazi angama-38, yayingamaphesenti angama-95.1.
Isikhathi sokuphendula izikhalazo zabagibeli ezibhekiswe ezinsukwini ezi-5 bekuyizinsuku ezingama-2.5. Isilinganiso sokubuyiselwa kwezikhalazo ezishiwo yiNova-Comet bekungaphezu kwezinsuku eziyi-10. Ngokwemininingwane esembikweni wokusebenza, inani lezehlakalo zabagibeli abayizigidi eziyi-2019 ngoDisemba ka-1 laliyisilinganiso sika-Nova-Comet kwaba ngu-4, kanti inani leMetro Istanbul lafika ku-2.3.
Kwi-Metro Istanbul's December 2019 Business Performance Scorecard Chofoza lapha
Abagibeli abayizigidi ezingama-200 Bahanjiswa Izithuthi ZakwaKocaeli Zomphakathi
Abangu-1 abayizigidi eziyizinkulungwane ze-200 ezibhekiswe emigqeni ye-Ankara
Izigxobo ezinyangeni ezintathu 1 million 200 abagibeli abayizinkulungwane eMalatyada
Imisebenzi ye-Ankara Metro Project Construction iyaqhubeka (M2) kanye (M3)…
Isikhumulo sezindiza i-Igdir samukela abagibeli abayizinkulungwane ezingu-200 ngonyaka owodwa
I-2 Million 200 isebenzisa i-EGO MOBILE Application enezinkulungwane eziyinkulungwane
I-3 Million 750 Izinkulungwane Zezinkulungwane Ezihanjiswe Ngesitimela Ngomkhosi We-Ramadan
I-Olympos Cable Cable Abantu abayizinkulungwane ezingu-200 bathuthele emhlanganweni
Le projekthi kanye nocwaningo lwezindleko ezilinganiselwe ku-Ankara Metro (M2) kanye (M4) sürdür
I-TCDD Ankara - Iphrojekthi Yejubane Elikhulu Ye-Istanbul High Speed ​​200 acak